အဆိုပါ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ မူပိုင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနခွဲမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ပထမအကြိမ်ထုတ် စာအုပ်များကို တစ်မျိုးလျှင် (၂) အုပ်နှုန်းဖြင့် ပေးပို့လာရာ စာပေဗိမာန်ရုံးက လက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်ကြားပေးခြင်း၊ www.moi.gov.mm/ppd Web Site တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ရရှိလာသည့် စာအုပ်များကို အမျိုးသားစာပေဆု ရွေးချယ်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဘာသာရပ် (၁၆) မျိုး အလိုက် ဘာသာရပ်များ ခွဲခြားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၁) ရက်တွင် စာအုပ် (၂၄၄) အုပ် ထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းစာအုပ်များ စာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း စုစည်းဖော်ပြ အပ်ပါသည်-
(၁) လူငယ်တို့နောင်ရေး စိတ်အေးရအောင် - ဒေါက်တာစစ်တင်(GP)၊ (၂) ပလေတိုနှင့် ကော်ဖီသောက်ခြင်း - မင်းသန့်ဟန်၊ (၃) ကျန်းမာပျော်ရွှင် ဖတ်စေချင် - ဒေါက်တာသက်ဦး၊ (၄) အပြာဦးနှောက် - မောင်မြတ်မိုး၊ (၅) သင့်ဘဝအတွက် အသက်ရှုခြင်းပညာ - ဖြိုးဝေ (မဟာဝိဇ္ဇာ)၊ (၆) စိတ်အတောင်ပံဖွင့် မြင့်မြင့်ပျံမယ် - မြမြဆွေ(စိတ်ပညာ)၊ (၇) ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ချစ်ခြင်းအားဖြင့် - ဒေါက်တာအောင်ကြီး၊ (၈) သုည၏တန်ဖိုး - လောကသစ္စာ၊ (၉) ငါ့လက်ထဲက ငါ့အောင်ပွဲ - သတိုးနွယ်၊ (၁၀) ဓနသိဒ္ဓိဂမ္ဘီရယတြာများ အတွဲ ၂ - ဆရာနိုင်အောင်လှိုင်၊ (၁၁) ရွေးကောက်ပွဲနီးလာချိန်ဆိုတော့ နိုင်ငံရေးကို ခေါက်မိမှဖြစ်မယ် - အံ့မောင်၊ (၁၂) ပစ်မှတ် - ရဲမင်းဝင်း(မြန်မာပြန်)၊ (၁၃) ဘောင်မဝင် ပညာတတ် - မောင်သူရ(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)၊ (၁၄) သုဇာတာ စာစုများ ၂၀၂၀ ဇွန်လ - ကလောင်စုံ၊ (၁၅) လိုတရ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနည်းများ - ဆရာဦးတင့်ထွန်း၊ (၁၆) ဝိပဿနာနှင့်ဆိုင်ရာ စာစုများပေါင်းချုပ် - ခန္ဓာ ၅ ပါး - တစ်ဦး၊ (၁၇) ကိုနေဝင်းတေးပေါင်းချုပ် - ကိုနေဝင်း၊ (၁၈) စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျိုးရေး လယ်သမားလက်စွဲ စာအုပ် - သိန်းဆု (စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်)၊ (၁၉) သဘာဝ ဝန်းကျင်မပျက်စိုက်ပျိုးရေး - သိန်းဆု (စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်)၊ (၂၀) ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေး တောင်သူလက်စွဲ စာအုပ် - သိန်းဆု (စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်)၊ (၂၁) ကျွန်တော် ဘီဘီစီ သတင်းထောက် - ဝင်းတင့်ထွန်း၊ (၂၂) မဟာပဌာန်းဒေသနာတော်နှင့် ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် - အရှေ့အိမ်၊ (၂၃) ချမ်းမြေ့ဂုဏ်ဝေ စာပေ အင်္ဂလိပ် - မေ စာပေ၊ (၂၄) ချမ်းမြေ့ဂုဏ်ဝေ စာပေ မြန်မာစာ - မေ စာပေ၊ (၂၅) တသိမ့်သိမ့်ဒွန် - တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ်၊ မြတ်ငြိမ်း၊ တင်မောင်မြင့်၊ (၂၆) မြန်မာပြည်စီးပွားရေးလမ်းညွှန် (အောက်ပိုင်း)၂၀၂၀ - ကလောင်စုံ၊ (၂၇) မြန်မာပြည်စီးပွားရေးလမ်းညွှန်(အထက်ပိုင်း)၂၀၂၀ - ကလောင်စုံ၊ (၂၈) ကလေးသူငယ်များအတွက် မြေပုံစာအုပ် - ဦးမြင့်သူ၊ (၂၉) ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ - ဒေါက်တာကြည်အောင်ထွန်း၊ (၃၀) စက်ဘီးခရီးသည် - မျိုးမြင့်ဗိုလ်၊ (၃၁) မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ပထမဆုံး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်စမစ်ဒွန်း၏ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း - ဆိုး (ဘာသာပြန်)၊ (၃၂) ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များ - မြမျိုးလွင်၊ (၃၃) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကျပ်အတည်းနှင့် … ကျော်လွှားနည်း - ခင်မောင်ညို၊ (၃၄) ဩဝါဒကထာနှင့် ဂမ္မဒေသနာတော်များ - ဘဒ္ဒန္တပညတန္တ၊ (၃၅) ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်အရှင်ဆေကိန္ဒ - မောင်ကိုကို (အမရပူရ)၊ (၃၆) မေးကြဖြေကြ ဓမ္မဝိနယ - အရှင်အဘယာလင်္ကာရ၊ (၃၇) သာသနာပြုရန် လမ်းကြောင်းမှန် - အရှင်အဘယာလင်္ကာရ၊ (၃၈) သာသနာတော်နှင့်အလွဲများ - အရှင်အဘယာလင်္ကာရ၊ (၃၉) ဖူကူဇာဝါ ယူကီချီ … တည်ထောင်သူ - နန်းမြကေခိုင်၊ (၄၀) ဦးဉာဏ်အောင် ဘဝပုံရိပ်လွှာ စာမျက်နှာ - ဦးအောင်သန်း(ရွှေစည်းခုံ)၊ (၄၁) နားမကြားနိုင်ငံတော် ကဗျာများ - သူရိန်ဝင်း၊ (၄၂) တဒင်္ဂများစွာ - ဒေါက်တာကျော်လွင်၊ (၄၃) ပီကာဆို၏ ပဥ္စလက်မီးအိမ်လက်ရွေးစင်စာတမ်းများ - မြသန်းတင့်၊ (၄၄) အမေရိကန်တက္ကသိုလ် အမေရိကန် ကျောင်းသား - အောင်မိုးဝင်း၊ (၄၅) နှစ်လွှာဝတ်ရုံနှင့်ဒဿသီတာ - စူးရှထက်ထက်၊ (၄၆) အရိပ်ပမာ ကံအရာနှင့်အခြားဆောင်းပါးများ - ဦးစောဝင်းထွန်း၊ (၄၇) သီတာမြင့်မိုရ် ထိုထိုများစွာ - ဘဒ္ဒန္တတိက္ခဉာဏ၊ (၄၈) နေသာတဲ့ဓနနဲ့ ဖြေသာတဲ့ဘဝ - သူရိန်စိုး(ဓမ္မဒူတ)၊ (၄၉) သောကငြိမ်းအေး နေနိုင်ရေး - အဝေရာသာအောင်၊ (၅၀) ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည် တည်ဆောက်ခြင်း - အောင်လှိုင် (မြန်မာပြန်)၊ (၅၁) ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုလိမ္မာသင်ခန်းစာ(ဒုတိယအဆင့်) - အရှင်ကဝိနန္ဒ၊ (၅၂) ဝိဉာဉ်နှုတ်တဲ့ မဖဲဝါ - တာတေ၊ (၅၃) သွေးဆာနေတဲ့ နတ်ဆိုးရုပ်ထုနှင့် သရဲတစ္ဆေဇာတ် လမ်းများ - လူအေး(Silence)၊ (၅၄) အိမ်နီကြီးပေါ်က သရဲများနှင့်သရဲ တစ္ဆေ ကဝေ ဇာတ်လမ်းများ - ဧကန်မင်း၊ (၅၅) အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိသုံးကြည့်ပါ - ဇမ္ဗူဒီပ၊ (၅၆) စိတ်ကိုသိပ်အလိုမလိုက်နဲ့ - လောကသစ္စာ၊ (၅၇) ဖတ်သင့် မှတ်သင့် တတ်သင့်သော မြန်မာကဗျာ အခြေခံရေးနည်း - မော်ကျွန်းရဲခိုင်၊ (၅၈) ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က အမိအဖကိုသတ်သူနှင့် ဆိုးမိုက်ကြသူများ - ဧကန်မင်း၊ (၅၉) မှတ်ဉာဏ်ကောင်းဖို့ လေ့လာစို့ - ဇမ္မူဒီပ၊ (၆၀) ပျောက်ဆုံးနေသော လူတစ်ယောက် - ဗန်းမော်တင်အောင်၊ (၆၁) သင့်ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှာတွေ့နိုင်စေဖို့ မေးခွန်း ၇ မျိုး - ခင်မေကြည်၊ (၆၂) ဩဝါဒကထာနှင့် ဓမ္မလက်ဆောင် - ပဓာနနာယကဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တတိလောက၊ (၆၃) ရောဂါကင်းဝေးဘုရားဆေး - ဦးလှသိန်းထွဋ်၊ (၆၄) ဝကာပျံ - အောင်လှသိန်း၊ (၆၅) မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ကြီး၏ ဘဝကန္တာရကို ဖြတ်သန်းခြင်း - ငြိမ်းချမ်းသာ၊ (၆၆) Online ပေါ်မှ ဓမ္မစာစုများ - ပြည်သိမ်းမောင်၊ (၆၇) ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး - ဦးကျော်ဇေယျ၊ (၆၈) ဟာသပုံပြင်များ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ - မိုးသူဇာအောင်၊ (၆၉) ပင်လုံပုံရိပ်လွမ်းစိတ်ဝေနှင့်ဟန်သစ်ကဗျာများ - တက္ကသိုလ်မင်းကျော်သူ၊ (၇၀) အပိုင်းအစများ - မေဇော်၊ (၇၁) ကမ္ဘာအိမ် - မောင်စံလေး (သထုံ)၊ (၇၂) အင်းစိန်ထောင်အတွင်းက ထူးထွေဆန်းပြား ဘိုးတော်မယ်တော်များ - ဇော်ငြိမ်းလတ်၊ (၇၃) ဓမ္မအမြင် ရှင်သန်ဖူးပွင့်စေ ဆုရဆောင်းပါးရှင်များ - ဓမ္မဝါဒဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့၊ (၇၄) မှော်လက်စွပ် မိစ္ဆာမျှော်စင်(ပထမပိုင်း) - ကောင်းမြတ်လွန်းသော်၊ (၇၅) သတိရခြင်း အသင်္ချေ - ထိန်အောင်လင်း(ဥသျှစ်ပင်)၊ (၇၆) ပဥ္စလက်ဂီတ - ကလောင်စုံ၊ (၇၇) ဝေဒနာ ရသစာစုများ - စောြမင့်ဦး၊ (၇၈) မန္တလေး အလွမ်းစာစုများ ၂ - မြတ်လင်းသူ၊ (၇၉) နှလုံးသားနဲ့ဖတ်ဖို့ - နေလင်းဝင်း၊ (၈၀) လူငယ်တို့ရဲ့ ခမ်းနားသောပစ္စုပ္ပန်တောက်ပသော အနာဂတ် - ကောင်းပြည့်သော်၊ (၈၁) ကမ္ဘာအဆက်ဆက် - ညီစစ်သည်၊ (၈၂) မင်းကိုသတိရဖို့ သတိလိုပါသလား ကေကေစီ - မောင်ခန့်မြေ(ထီလာ)၊ (၈၃) ခရီးသွား ကမ္ဘာမြေနှင့်အခြားသိပ္ပံဝတ္ထုတိုများ - နောင်နောင်စိုးသိမ်း၊ (၈၄) ချစ်သော - အိချို၊ (၈၅) နှလုံးသားစာမျက်နှာ ဝတ္ထုတိုများ - မိုးဝေ၊ (၈၆) လူငယ်နဲ့ အခွင့်အလမ်း - ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)၊ (၈၇) လေးမြတ်သောအကျင့်နှင့် ပေးဆပ်သောအချစ် - ဆရာလေးဒေါ်ဓိတိမာ၊ (၈၈) နှစ်ဖက်လှနိုင်ကြပါစေ - အရှင်ကောသလ္လ(ရေး)၊ (၈၉) ကမ္ဘာမကြေ အမုန်း - အညို၊ (၉၀) အရူးထောင်မှာ ဆယ်ရက်တာ - ဟိန်းလတ်၊ (၉၁) ပါးနီ - သူဝေး၊ (၉၂) ရခိုင်အက္ခရာ ရခိုင်စာ(အထုပ္ပတ်အကျဉ်း) - ဂေါယာမြေစောဝင်း၊ (၉၃) ပဲခူးဆောင်က ကိုအောင်ဆန်းနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့် အမှတ်တရဆောင်းပါးများ - သိန်းအေး၊ (၉၄) နောက်ဆုံးရထား - အောင်မိုးဝင်း၊ (၉၅) မန္တလေး၏နှလုံးသားကို ဖြတ်သန်းခြင်း - မောင်သင်းပန်၊ (၉၆) မြစ်လက်တက်များ မော်ဒန်ကဗျာများစုစည်းမှု - ကလောင်စုံ၊ (၉၇) ပညာရေး စက်ရုပ်လူသားလေးတွေရဲ့ မနက်ဖြန် - လင်းထိုက်၊ (၉၈) ကမ္ဘာပြုစိတ်ကူး စိတ်သန်းများ - လင်းတည်ဦး၊ (၉၉) ပြတင်းပေါက်က ကြည့်လိုက်ပါ - မှိုင်း (ဆေး-၂)၊ (၁၀၀) ဒုတိယမြောက် ဒသဂံရသ စာစုများ - ကလောင်စုံ၊ (၁၀၁) ဒေါက်တာဒူးလစ်တဲလ်၏ ပျံလွှားစာပို့ - ညိုအံ့၊ (၁၀၂) ခရမ်းနုရောင် - အရှင်သုမင်္ဂလ(စစ်ကိုင်း)၊ (၁၀၃) လက်ဆောင်မွန်နှင့်ပင်ကိုရေးပုံပြင်များ - ဇလွန်ကျော်ဦး၊ (၁၀၄) ရွှေသော့နဲ့ဘီလူးကြီးနှင့်ပင်ကိုရေးပုံပြင်များ - ဇလွန်ကျော်ဦး၊ (၁၀၅) မေတ္တာစွမ်းအားနှင့်ပင်ကိုရေးပုံပြင်များ - ဇလွန်ကျော်ဦး၊ (၁၀၆) ပင်လယ်ထဲကခေါင်းလောင်းသံ နှင့်ပင်ကိုရေးပုံပြင်များ - ဇလွန်ကျော်ဦး၊ (၁၀၇) ဘဝမေ့သူနှင့်ပင်ကိုရေးပုံပြင်များ - ဇလွန်ကျော်ဦး၊ (၁၀၈) ပညာရှိစကားနှင့်ပင်ကိုရေးပုံပြင်များ - ဇလွန်ကျော်ဦး၊ (၁၀၉) စိန်ပန်း ကံ့ကော် ဆွတ်ပျံ့ လွမ်းဖွယ် - ကလောင်စုံ၊ (၁၁၀) ရေကန်အသင့် ကြာအသင့် ဆောင်းပါးပဒေသာ ပေါင်းချုပ် - မရွှေမြိုင်၊ (၁၁၁) လွမ်းသလေ မံစီမြေနှင့်အခြားရသစာစုများ - ရွှေမိ(မန်းတက္ကသိုလ်)၊ (၁၁၂) တို့များအရွယ် ညောင်းခဲ့ရင်ကွယ် - ရဲမြလွင်၊ (၁၁၃) ကျောက်မီးသွေး မိုင်းလုပ်ငန်း ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ - ဒေါက်တာချစ်ကိုကို၊ (၁၁၄) စတီဖင်ကင်း၏ ဝတ္ထုတိုများ - လင်းခန့်၊ (၁၁၅) ဆက်ရန်မရှိတော့ပါ - မွန်ဟော်စီ၊ (၁၁၆) အန်းဖရန့် - ပန်းဆက်လမ်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့၊ (၁၁၇) ဆန့်ကျင်ဘက်အားလုံး ပေးယူမျှညှိ ငြိမ်းချမ်းရေး - ကျော်ဌေးကြည်၊ (၁၁၈) မြတ်မိခင် - မိုးပြို(မင်းပြား)၊ (၁၁၉) လူတစ်ယောက်ရဲ့ကောင်းကင်များ - ဖိုးသော်တာ၊ (၁၂၀) မျက်ရည်ဆိုင် - နွေသစ်ငြိမ်း၊ (၁၂၁) လာဘ်ဖွင့်လက်ဆောင် - သက်နှင်းဆွေ(ပုပ္ပါး)၊ (၁၂၂) မောရဝတီမှ ပဲ့တင်သံ - ကလောင်စုံ၊ (၁၂၃) သတင်းသမား တရုတ်သွားတော့နှင့်အခြားဆောင်းပါးများ - ကိုရွှေအောင်၊ (၁၂၄) ခေါင်းဆောင်မှု လျှို့ဝှက်ချက် - ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)၊ (၁၂၅) အမှီကင်းတဲ့ ပန်းကလေး - သက်ထားခင်၊ (၁၂၆) စေတနာ အော်ပရေးရှင်း(ဆောင်းပါးစုစည်းမှု) - အလင်းရောင်(မြို့သာ)၊ (၁၂၇) တူးသောင်ဇင် တွမ်တီးကဗျာစုစည်းမှု - ကလောင်စုံ၊ (၁၂၈) အစိမ်းရောင်သတ္တိရှင်များနှင့်အခြားကဗျာများ - ဌေးသစ်လွင်(ပရိမ္မ)၊ (၁၂၉) ဒဿနအမြင်ထဲက ဟာသရှုထောင့် ဟာသရှုထောင့် ထဲက ဒဿနအမြင် - မောင်ကြည်သန့်၊ (၁၃၀) ပုဂံနှင့်ကဗျာ ဆရာနှင့်တပည့် - ခင်မောင်ဦး(မြန်မာစာ) ဒေါက်တာအောင်ဆန်း၊ (၁၃၁) အနှစ်ချုပ် ကမ္ဘာ့သမိုင်း - အောင်ချိုချိုကျော်၊ (၁၃၂) မြန်မာ ၂၀၅၀ အနာဂတ်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား - ကလောင်စုံ၊ (၁၃၃) ဗျဂ္ဃနဂရမှ တိုက်ပွဲခေါ်သံနှင့် မြန်မာ့တော်လှန်ရေး ကဗျာရှည်များ - မောင်ကြည်သော် (ကောလင်း)၊ (၁၃၄) မဲခေါင်-လန်ချန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု - မဲခေါင်-လွန်ချန်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုညှိနှိုင်းကွပ် ကဲရေးအဖွဲ့(မြန်မာ)၊ (၁၃၅) လေးနက်စုံလင် ရခိုင်ရိုးရာ ပုံပြင်ဝတ္ထုများပေါင်းချုပ် - များအောင်၊ (၁၃၆) ဇာတ်လမ်းစုံ မောင်ကျောက်ခဲ - ကြည်စိုးထွန်း၊ (၁၃၇) ဝိုင်အမ်ဘီအေ ဒီရေအနိမ့်အမြင့် - တီမိုအေး(ကျန်းမာ)၊ (၁၃၈) မဟာပဌာန်းနှင့်ကပ်ကျော်အန္တရာယ်ကင်းဂါထာတော်များ - ကိုသစ္စာ၊ (၁၃၉) မြန်မာ့စိုက်ပျိုး စီးပွားရေးလမ်းညွှန် ၂၀၂၀ - ကလောင်စုံ၊ (၁၄၀) တစ်နှစ်တာ ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်ပေါ် မွန်းတည့်မျဉ်းဖြတ် ဇယားနှင့်မဟာဝေဒဗ္ဗမန္တန်တော် ရွတ်ပွားနည်း - ပညာဒီပက၊ (၁၄၁) တရားမ ကော်မရှင်စာဆိုင်ရာ မှတ်စုကြမ်း - ဦးသက်ထွန်း(ခရိုင်တရား သူကြီး-ငြိမ်း)၊ (၁၄၂) မြန်မာမြေမှ မွတ်စလင်တို့၏ နှစ်အလိုက်အချိန်ပြသမိုင်း - ကျော်နေမင်း(မြို့ပြ)၊ (၁၄၃) SMART KIDS - သန်းသန်းခိုင်၊ (၁၄၄) ကျန်းမာရေးဗဟုသုတစုစည်းမှု (၂၀၂၀/၁) - ခင်ချမ်းမြေ့သူ၊ (၁၄၅) ဒွတ္တဘောင်နှင့် သုံးပန်းလှ မင်းသမီး - သန်းထွန်း(လှည်းကူး)၊ (၁၄၆) ကံဆိုသည်မှာ စေတနာ မုဒိတာအမှာစာများ - ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)၊ (၁၄၇) ဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင်းပါးများ အမှတ် ၄ - ဒေါက်တာမောင်အောင်၊ (၁၄၈) မြင့်မိုရ်တောင်ထက်က ကြယ်တစ်ပွင့်နှင့်သုတရသ စာစုများ - မြနန္ဒာဉာဏ်ဝေ၊ (၁၄၉) ပေးထားချက်များ - ရခိုင်လှမြင့်၊ (၁၅၀) ကျွန်တော်နှင့်လမ်းမများ - အောင်သန့်၊ (၁၅၁) ပိုးဖလံတို့ရဲ့ ကောင်းကင်နှင့်မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတိုများ စုစည်းမှု - ကြည်မွေ့အိမ်၊ (၁၅၂) ကျွန်တော့်အတွေး ကျွန်တော့အမြင် - ရခိုင်လှမြင့်၊ (၁၅၃) လင်းပြချက်များ - မောင်ဆေးရိုး၊ (၁၅၄) ယူဇနာမွှေး - မလှမွန်(ရေနံ့သာ)၊ (၁၅၅) ဥတ္တရလမင်း ခံစားသူအကြိုက် မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုများ ၂၀၁၉ - ကလောင်စုံ၊ (၁၅၆) လေးပွင့်ဆိုင် - စိန်ဝင်းစိန်၊ (၁၅၇) ရခိုင် ထီးနန်းဓလေ့ - မင်းပြားမင်းသိန်းဇံ၊ (၁၅၈) မနက်ဖြန်တွေမှာ မယုံရသူတွေနဲ့ပဲပေါင်းမယ် - လင်းလက်ကဘို၊ (၁၅၉) အောင်ဆန်းတို့အမေ အောင်ကျော်တို့အမေ - အံ့မောင်၊ (၁၆၀) မြတ်ဆရာပညာရေးစာစုများ - ကလောင်စုံ၊ (၁၆၁) အမှောင်လူသားရဲ့ အလင်းတန်းများ - ထိန်လင်း၊ (၁၆၂) အီလွန်မာ့ခ်ရဲ့ ကြီးပွားချမ်းသာရေး … ချမ်းသာစို့ - ဖေသက်ခိုင်၊ (၁၆၃) တိုင်စာ - ချောနကျယ်၊ (၁၆၄) ထိုမိန်းမသား ကျွန်တော့်အား ချစ်ခဲ့ဖူး၏ - စာဆို၊ (၁၆၅) ငွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူ အတော်ဆုံးလူ - ဆရာထိန်လင်း၊ (၁၆၆) စိတ်ဖိစီးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းလမ်းကောင်းများ - ဇေရတု၊ (၁၆၇) ဤရွှေခွက်သည်နှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အမှတ်တရ ဆောင်းပါးများစုစည်းမှု - ဂျေလှသင်၊ (၁၆၈) ပန်းပုံပြင်နှင့် အခြားကဗျာများ - နေဘုန်းမိုရ်၊ (၁၆၉) DIMENSION - ကလောင်စုံ၊ (၁၇၀) တစ်နားပို့တဲ့ ကြယ် - ကလောင်စုံ၊ (၁၇၁) ရေချယ်ဦး - ရီနေဆန်း၊ (၁၇၂) ရင်မှာဝေဒနာကုဋေကဋာနှင့် ရေကြောင်းလေ ကြောင်း ဝတ္ထုပေါင်းချုပ် - ကို (တက္ကသိုလ်)၊ (၁၇၃) စိတ်ကူးထဲထည့်ဖူးထားတဲ့ အပွင့်တွေ - ဇော်ဇံဝင့်၊ (၁၇၄) စိတ်လျှော်စက်နှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ - မြသွေးရည်၊ (၁၇၅) သွေးနှင့်သစ္စာ ကမ္ဘာတည်နှင့်အခြားကဗျာများ - စလင်းဘုန်းကျော်၊ (၁၇၆) သူ…သက်သာစေ - မားအလိမ္မာ၊ (၁၇၇) ဘာလဲဟဲ့ အခက်အခဲ လာစမ်းဟေ့ အဆီးအတား - မောင်ကြည်သန့်၊ (၁၇၈) အယောင်ဆောင် သူရဲကောင်းနှင့်အခြားပုံပြင်များ - အရှင်ဉာဏိန္ဒ(ဘီအေ- သမိုင်း)၊ (၁၇၉) ကျန်းမာပျော်ရွှင်အောင်မြင်သောဘဝ -လောကသစ္စာ၊ (၁၈၀) အောင်မြင်ရေးအတွက် ဆေးတစ်ခွက် - လောကသစ္စာ၊ (၁၈၁) မင်းမရှိရင် မဖြစ်လို့ - နေလအောင်၊ (၁၈၂) နွေဦးရဲ့ အရူးလေး - ဒီအိမ့်လှိုင်း၊ (၁၈၃) အနာဂတ်များရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်နှင့်အခြားဆောင်းပါးများ - အရှင်ပညာသာမိ (အလင်းပြကြယ်)၊ (၁၈၄) မင်းနန်သို့ စကားလက်ဆောင် - နွေလူသစ်၊ (၁၈၅) လူစိတ်မရှိတဲ့လူ ဝတ္ထုတိုများ - ဝါဆိုကိုဦး (တောင်ကြီး)၊ (၁၈၆) အားနည်းသော တောင်သူလယ်သမားတို့၏ဘဝ - ကံလှ(ငါန်းဇွန်)၊ (၁၈၇) ဓါတ်တိုင်အသေ - ကလောင်စုံ၊ (၁၈၈) သားတို့သမီးတို့ဖတ်ဖို့ အင်္ဂလိပ်စာ - ဒေါက်တာစိုးသန်း၊ (၁၈၉) လောကဓံမျဉ်းကွေးအပေါ်မှ စိတ်ကူးအဖြောင့်များ - ကလောင်စုံ၊ (၁၉၀) သင့်ကြောက်ရွံ့မှုကို အောင်နိုင်ရေးနဲ့ သင့်အစွမ်းအစ ကိုကြိုးဖြေလွှတ်ရေး - ကောင်းသာ၊ (၁၉၁) စစ်မှန်သောခေါင်းဆောင်တို့၏ . . . ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ - ပါမောက္ခဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၊ (၁၉၂) ခေတ်ပေါ်ကဗျာဖန်တီးသူနှင့်ဖန်တီးမှုအနုပညာ - ဒေါက်တာခင်မာသက်၊ (၁၉၃) ဝေးပြီ - ကျော်ထက်ထွေး၊ (၁၉၄) အကယ်၍ထပ်ချစ်ဖြစ်ခဲ့ရင် - Pheno၊ (၁၉၅) လွမ်းဖူးတာပေါ့ - နန္ဒာ(ယောနယ်)၊ (၁၉၆) အသည်းကွဲရှင်းတမ်း - နောဧက၊ (၁၉၇) တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သလို - ရတုသစ်၊ (၁၉၈) အိပ်မက်တွေကအစ သာယာပါစေ - စည်သူ (ရွှေကန်မြေ)၊ (၁၉၉) နှင်းဆီမြစ် ကဗျာစီးဆင်းမှု - ပန်းအလင်္ကာ(ပလိပ်)၊ (၂၀၀) ချစ်သူရယ်ဖို့ ကဗျာများ - သျှောင်ကေရှင်(မုံရွာ)၊ (၂၀၁) ခွန်းချို ကဗျာများ စုစည်းမှု - စောနေသွေး၊ (၂၀၂) သမီးနှင့်စကားပြောဖြစ်ခဲ့သည့် ညနေခင်းများ - နေမျိုး၊ (၂၀၃) တစ်စက္ကန့်လေးပင်မခွဲချင်နှင့် ရသဝတ္ထုတိုများ - ထွေးကြည်(သလ္လာဝတီ)၊ (၂၀၄) ပန်းလည်းလှစေ ပျားလည်းဝစေနှင့် စာပေရေးရာ အဖြာဖြာ - မောင်ငြိမ်းသူ(ကြို့ပင်ကောက်)၊ (၂၀၅) အသက်အရွယ်အလိုက် လှုပ်ရှားမှုများ ကာတွန်းရေး ဆွဲပုံအဆင့်ဆင့် - ကာတွန်းတာရာ၊ (၂၀၆) ပျူနှင့်ပအိုဝ်းမှာတွေးစရာများ - ခွန်စောထွန်း၊ (၂၀၇) မြို့ပြလူနေအိမ်ရာအတွက် မြေငှားဂရန် - ဦးမောင်မောင်ညွန့်၊ (၂၀၈) All about Raspberry pi - ကောင်းထက်ထွန်း၊ (၂၀၉) တောတွင်း ဂီတဝိုင်း - သပြေ (ကိုရီးယား)၊ (၂၁၀) မရှိမဖြစ် အမြစ် - တောလူ၊ (၂၁၁) တိုင်းရင်းဆေးပညာလာအကျိတ်အနာနှင့် အနာ ပေါက်ကုသမှုဆိုင်ရာ ဆေးနည်းများ - ပါမောက္ခအောင်ကျော်မင်း၊ (၂၁၂) မြန်မာ့ရိုးရာစကားပုံများ ဆေးရောင်ခြည် ၅ - ဗိုသံ၊ (၂၁၃) လွယ်လွယ်လေးစက်ချုပ်ကြမယ် အခြေခံစကတ် ဂါဝန်ချုပ်နည်း - ကလောင်စုံ၊ (၂၁၄) မြန်မာစာ ဗျည်းအက္ခရာ လေ့ကျင့်ပါ - နွယ်နီကံဝင်း၊ (၂၁၅) နေ့စဉ်မှန်မှန် လေ့ကျင့်ပေး အကျင့်ကောင်းလေး - နွယ်နီကံဝင်း၊ (၂၁၆) စုံစုံလင်လင်သင်္ချာသင် - နွယ်နီကံဝင်း၊ (၂၁၇) စာရင်းအင်း ဒေတာဆန်းစစ်နည်း - ဆရာရွှေလင်း(သုတေသီ)၊ (၂၁၈) ထေရဝါဒဓမ္မစာစောင် ၁၄/၂ - ကလောင်စုံ၊ (၂၁၉) မဟာသမယသုတ် ၇ သုတ် - မဇ္ဇျိမအလင်း၊ (၂၂၀) မဟာသမယသုတ်နှင့် မဟာပဌာန်းဒေသနာတော် - မဇ္ဇျိမအလင်း၊ (၂၂၁) ဂေါ်ရခါးတို့ နီပေါမြေ - ဒေါက်ထွေး(ဆေး/မန်း)၊ (၂၂၂) ခေတ်ရေစီးထဲက ရင်ခုန်စုတ်ချက်သစ်များ - ကိုတောနေ(Art Critic)၊ (၂၂၃) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေလွှာအမျိုးမျိုးနှင့် ၎င်းတို့၏ဝန် ထမ်းနိုင်သောအားများ - ဒေါက်တာကျော်လင်း (ဆောက်လုပ်ရေး)၊ (၂၂၄) အယသ္မာဉာဏစက္က၏ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုသမိုင်း - ဦးမောင်မြဦး၊ (၂၂၅) ချစ်နှစ်သွယ်နှင့်ဝတ္ထုညွန့်ပေါင်းချုပ် - ၄ - ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ (၂၂၆) ဓာတုပစ္စည်းများဒေတာဘဏ် - ဒေါက်တာသန်းထိုက်၊ (၂၂၇) ၁၀ မျိုးတွဲ ဝတ်ရွတ်စဉ် - မိတ်ဆွေစာပေစာတည်းအဖွဲ့၊ (၂၂၈) ဘာသာရေးအတွေးနှင့် နိုင်ငံရေးအမြင် - မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)၊ (၂၂၉) STAR DUST COMMUNITY Vol.2 No.1 - ကလောင်စုံ၊ (၂၃၀)9DAYS - ကလောင်စုံ၊ (၂၃၁) ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွား မြန်မာ့ အစားအစာများ - အိစံ၊ (၂၃၂) ကလေးဘဝကစားကြမယ် ဆေးရောင်လှလှခြယ်ကြမယ် - မြင့်ကေ၊ (၂၃၃) အခြေခံကြယ်ကြည့်နည်းနှင့်ကြည့်နိုင်သောအရာ ၅၀ - ဝေလင်းမောင်၊ (၂၃၄) သိကောင်းစရာ ဂေဟဗေဒနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် - မောင်တင်ဦး(ရုက္ခ)၊ (၂၃၅) ရဲလှဆရာတော်၏စာပေလက်ရာများ - အရှင်အဂ္ဂဝံသ(ယော)၊ (၂၃၆) ငြိမ်းချမ်းရေးမိခင်နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ - အရှင်က္ကန္ဒစရိယ၊ (၂၃၇) စာရူး - ဦးကျော်မင်း(ကထိက)၊ (၂၃၈) အကယ်၍ ဝေးသွားခဲ့ရင်…. - သော်ဝေးလူ(K.N.T)၊ (၂၃၉) အင်းစိန်ထောင် အမှတ်တရနေ့ရက်များ - စံ-ဇာဏီဘို၊ (၂၄၀) စကားလက်ဆောင် တရားလက်ဆောင် ၂၃ - လေးအိမ်စုအရှင်ဝိစိတ္တသာရ၊ (၂၄၁) အရေးကြီးပြီး သွေးစည်းကြစို့ - တက္ကသိုလ်မြတ်သူ၊ (၂၄၂) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအပေါ် ကမန်လူငယ် တစ်ဦး၏အမြင်နှင့် နိုင်ငံရေးရာစာစုများ - ဒါလီမြင့်၊ (၂၄၃) မှော်နက်လမ်းစဉ် အရှင်သခင် (ဒုတိယတွဲ) - ကျန်ချင့်ယွီ၊ (၂၄၄) မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း - စံ-ဇာဏီဘို